Lithini ixabiso eliqhelekileyo lokutshintsha koxinzelelo? Abavelisi bokutshintsha koxinzelelo ukunceda ukuba uqonde ngokupheleleyo!
Zininzi izinto ebomini bethu ezifuna ukulinganiswa koxinzelelo, ezinje ngeekhemikhali, oomatshini, ii-hydraulic kunye ne-hydroelectric izicelo ezifuna ukubekwa kweliso ngexesha langempela koxinzelelo lwazo, kodwa xa amaxabiso oxinzelelo aphezulu kakhulu alinganisa izixhobo zoxinzelelo ...
Yintoni umahluko phakathi kweglasi yefayibha yefoyile ye-aluminium kunye nefoyile yealuminium?
A. Uyintoni umahluko phakathi kweglasi yefayibha yefoyile ye-aluminium kunye nefoyile yealuminium? Iteyiphu yeglasi yefayibha yeglasi yealuminium, kusetyenziswa inkqubo eyahlukileyo eyahlukileyo, ...
Iteyiphu yefoyile yeAluminiyam- iteyiphu yomlingo enokuthi "ibhabhe" iye esibhakabhakeni
Umgibeli welinye ilizwe wothuswa kukufumanisa ukuba abasebenzi abasebenza kwisikhululo seenqwelomoya babecofe injini ngaphambi kokuba indiza ihambe. Indawo leyo yathathwa kwaye yathunyelwa kwi-intanethi, iphakamisa iinkxalabo kunye nemibuzo malunga nokhuseleko ekusebenziseni itape ukulungisa i-airfram ...
Iteyiphu ye-MOPP ye-Egret.
I-Egret Tape, eyasekwa ngo-1997 kwisixeko sase-Changzhou, kwiPhondo lase-Jiangsu, igubungela indawo ye-13,000 yeemitha ezilandelelanayo, kunye nendawo yokwakha iyonke ye-20,000 square metres. Iimveliso zethu ezincamathelayo eziphambili zinokuhanjiswa ngokwamanqanaba amabini abanzi. Eyokuqala ngothotho lwe-tape enamathelayo: i-aluminium foil tape, PE ...
Indima yetape yesiponji ye-EPDM kwiimveliso zesiponji ezinganyangekiyo ngobushushu kunye neendlela zokwenza isicelo
I-Butyl yerabha inokugqwesa igesi kunye nokuchasana nobushushu, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeerabha ezahlukileyo ezinobushushu, iimveliso zesiponji esingenabushushu bushushu yenye yazo. Abavelisi abaninzi bokulungisa ityhubhu bayazi ukuba ngaphakathi butyl ...
Iiteyiphu zeAluminiyam ongazange wazisebenzisa
Xa kuziwa kwi-aluminium tape foil, ndiyakholelwa ukuba sonke kufuneka siqhelane nayo, njengoko inokubonakala rhoqo kudidi lwezixhobo zekhaya. Okokuqala, i-aluminium foil tape yenziwe nge-adhesive efanelekileyo yokuthintela uxinzelelo, kunye neempawu ze-aluminium foil ephezulu ...
Ithini iteyiphu yegwebu?
Iiteyiphu ze-Foam zisetyenziselwa ukuthomalalisa isandi, ukukhusela ubushushu, ukuqinisa amatywina, ukugoba / ukutywina, kwaye ziyilelwe ukonyusa ukubonakala kunye nokuphucula ukusebenza kuyilo lwakho. Iteyiphu nganye yegwebu inempawu ezizodwa kunye neenjongo ezifanelekileyo. Ezinye zezi teyiphu ziyafumaneka kwiiyantlukwano ...
Zeziphi izinto ezenziweyo zetape yealuminium
Okokuqala, iteyipu yealuminium yenziwa kukunamathela kuxinzelelo oluphezulu. Ukongeza, ifoyile yealuminium ineempawu zokumelana nobushushu obuphezulu kunye nokungena komoya, ke inefuthe elilungileyo lokugcina ubushushu kunye neempawu ezibonakalisayo, ezinokusetyenziswa kubomi bethu ...